देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था - Arthik Sandesh देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था - Arthik Sandesh
काठमाडौं–आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ८.६ प्रतिशत र २०७४÷७५ मा ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा आर्थिक वृद्धिदर २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको र बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने अवस्था देखिएको मत्री शर्माले बताउनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २६.८ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रका १४.६ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको योगदान ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त क्षेत्रहरुको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको सरकारले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको बताइएको छ । विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतको रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को एघार महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको भएपनि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिएको उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्ह्थ्य बचतको अनुपात १३ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान सरकारले गरेको छ । साथै, आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्ह्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको थथार्थपत्रमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान रहेको छ । त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष२०७३÷७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु.११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३५ प्रतिशतमा सिमित हुन पुगेको उल्लेख छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा उक्त खर्च ७६.९ प्रतिशत हासिल भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको र आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित रकमको ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
यस्तै बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको सरकारले बताएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम रहन नसकेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको बताइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा कुल खर्चको २७.७४ प्रतिशत रकम असार महिनामा खर्च भएकोमा आ.व. २०७७÷७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा असार महिनामा भएको औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै विगतको सरकारले कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरेको कारण बजेट प्रतिको विश्वसनियतामा ह्रास आएको लेखिएको छ । वि.स.२०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रु.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ । तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु.२ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो । यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्त्यमा कोष रु. १ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन । विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार नदेखिएको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो । देशको राजस्व मूलतः आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ । विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दीगोपना कायम हुन नसकेको सरकारले बताएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ ।
निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७÷५८ मा ४८ प्रतिशत रहेको निर्यात आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ । यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वस्तु निर्यात रु. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा उक्त निर्यात रु.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ । पछिल्लो समयमा आयातीत कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा रु. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयातमा पुँजीगत अंश १४.८ प्रतिशत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश ३७.२ प्रतिशत रहेको छ ।
आयात निर्यात र विप्रेषणमा भएको अस्थिरता शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ । कोभिड–१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रु.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो । तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रु.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा २०७७÷७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ । यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रु.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये रु.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रु.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण रहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आन्तरिक ऋण रु.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रु.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ । यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको उल्लेख छ ।
वैदेशिक सहायता परिचालनबाट प्राभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको स्थितिमा वार्षिक बजेटको आकार कृत्रिम रुपमा बढाउनमा समेत यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रु.३ खर्ब २७ अर्ब गरिएकोमा रु.१ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.६ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रु. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रु.१ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात ४५ प्रतिशत प्राप्त भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रु.३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको २ सय २९ प्रतिशतले बढी हुन आउँछ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा रु. १३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को एघार महिनामा रु.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ । बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन् । सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा रु ७६अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ । सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।
हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यन्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ । वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय तथा लागत एवम् गुणस्तरीय रुपमा सम्पन्न हुन नसकेको सरकारले बताएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रु.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ । उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ । सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन् । नाफामा रहेका मध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आ.व. २०७६÷७६ मा रु. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको उल्लेख छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रु.३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष२०७७÷७८ मा रु.३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको माग बमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तसम्ममा २७ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू.१ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ । बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना, मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न नसकिएको स्वीकार गरिएको छ ।
कोभिड–१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन नसकेको उल्लेख छ । (अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा प्रस्तुत गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारीको दस्तावेजको संम्पादित अंश)